फिल्म क्षेत्रको बेथिती अन्त्य गर्न इमान्दार हुने कि भन्ने ? – Mero Film
फिल्म क्षेत्रको बेथिती अन्त्य गर्न इमान्दार हुने कि भन्ने ?
चलचित्र पत्रकार संघको आयोजना र चलचित्र निर्माता संघको सहकार्यमा राजधानीको बसुन्धरामा नेपाली फिल्मका वेथिती बिषय अअन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भयो । अन्र्तक्रियामा थुप्रै कुरामा बहस भए, चर्काचर्की पनि भए । तर, अन्र्तक्रियामा उठेको मुख्य बिषय पारदर्शी हिसाबकिताबको नै भयो ।
फिल्म क्षेत्रमा पारदर्शी हिसाबको मुद्दा उठेको धेरै भयो । तर, सबैजना आफूमा इमान्दार नहुँदा फिल्म क्षेत्र धराशायी बनिरहेको छ । हलमा मान्छे नभएपनि फिल्मले लगानी उठायो भनेर हिसाब सार्वजनिक गर्ने निर्माताहरु पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । निर्माताको आग्रहमा वास्तविक हिसाब भन्दा ५० लाख भन्दा बढी हिसाब देखाइदिने वितरक पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । फिल्मको व्यापार कती हो भनेर स्पष्ट भन्न नसक्ने हलवालाहरु पनि पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । अनी, यही पारदर्शी नै नभएको हिसाबलाई संचारमाध्यममा लेख्ने पत्रकार पनि पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । पारदर्शी नै हुन नसक्ने अवस्थाले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउँला ?
अन्तरक्रियामा फिल्मको हिसाब बास्तविक रुपमा संचारमाध्यमले नल्याएको आरोप धेरै लाग्यो । संचारकर्मीले पारदर्शी हिसाब दिन नसकेको भन्दै खोजमुलक पत्रकारिता गर्न आग्रह पनि गरियो । संचारमाध्यमकै कारण फिल्म क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको खालका बहस पनि भएका थिए । तर, के संचारमाध्यमले नै पारदर्शी हिसाब निकाल्न नसकेका हुन् त ?
चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदयको कुरा बाझियो । उनले फिल्मको स्पष्ट हिसाब दिन संचारकर्मीलाई आग्रह त गरे तर हिसाब माग्ने संचारकर्मीलाई तपाई को हो र मैले हिसाब दिने भनेर जवाफ पनि फर्काए । हिसाब दिने काम चलचित्र वितरक र निर्माताको मात्र भएको उनको दाबी थियो ।
अब, संचारकर्मीले हिसाब माग्दा तपाई को हो र भन्ने अवस्था आउँदा पारदर्शीता कसरी होला र ?
पारदर्शी हुनका लागि हिसब दिने निर्माता, वितरक, हल संचालक नै इमान्दार हुन जरुरी छ । तर, अहिले सार्वजनिक भैरहेका फिल्ममा व्यापार हेर्दा स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि निर्माता र वितरक कती इमान्दार छन् ?
बेथिती बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा इमान्दिरता हुनुपर्छ भन्ने बिषय धेरै उठेको थियो । तर, इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने बिषय त उठ्यो तर इमान्दार को हुने भन्ने कुरामा सबैको अडान देखियो । इमान्दारिताको कुरा मात्र उठाएर हुँदैन, सबैभन्दा पहिले आफै इमान्दार हुनुपर्छ ।
तर, यहाँ इमान्दारिता अरु हुनुपर्छ भन्ने तर आफू कहिले हुन नखोज्ने प्रथा हाबी छ । हरेक कुरामा झुटो मात्र भएपछि इमान्दारिता कसरी हुन्छ ।
इमान्दिरता सबैभन्दा पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्ने कुरा हो । तर, यहाँ इमान्दारिता अरुमा मात्र खोज्ने काम बढेको छ । यसैले नै हो फिल्म क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको ।
न त कलाकार, न पत्रकार, न निर्माता, न निर्देशक, न वितरक, न हल संचालक । कोही पनि इमान्दार नभएपछि कसरी चल्छ क्षेत्र ?
२०७६ वैशाख ३ गते ११:२६ मा प्रकाशित